खेल सिक्दै- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १५, २०७६ अमृता अनमोल
भाइबहिनीहरू, गृहकार्य सकेपछि तिमीहरू के गर्छौ ? रुपन्देहीका केही साथीहरू भने खेल सिक्छन्  । यहाँ विभिन्न खेलका एकेडेमी छन्  ।
तिनमा खेल्ने तरिका सिकाइन्छ, जसले ती साथीहरूलाई खेल सिक्ने अवसर जुटेको हो । रुपन्देहीमा खेलकुद गतिविधि गर्ने ५० वटा क्लब छन् । २५ वटा खेलकुद संघ छन् । तीमध्ये १४ वटाले बालबालिकाका लागि खेल एकेडेमी खोलेका छन् । तिनले फुटबल, लनटेनिस, जुडो, कराते, क्रिकेट र ब्याडमिन्टन सिकाउँछन् । एकेडेमीमा बालबालिकाको समूह बनाइन्छ । दिनहुँ खेल्न मैदान दिइन्छ । साथीहरू बिहान–साँझ एकेडेमीमा जम्मा हुन्छन् । प्रशिक्षकले खेलको नीति र विधि सिकाउँछन । यसपछि उनीहरू मज्जाले खेल्छन् ।
खेल्न पाउँदा उनीहरू धेरै खुसी छन् । केहीले भविष्यमा खेलाडी बन्ने सपनासमेत बनाएका छन् । त्यसमध्येका हुन्– बुटवलका रितेश ज्ञवाली । उनी कक्षा ६ मा पढ्छन् । दिनभर स्कुल जान्छन् । साँझमा लेख्ने र पढ्ने सबै गृहकार्य सक्छन् । बिहान भने लनटेनिस खेल्न जान्छन् । ‘बिहान साढे ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म खेल्छौं र सिक्छौं,’ उनले भने, ‘खेल्दा निकै रमाइलो लाग्छ, शरीर पनि फूर्तिलो हुन्छ ।’ नियमित खेल्न पाएकै कारण रितेशले विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिएका छन् । १० वर्षमुनिको राष्ट्रिय लनटेनिस प्रतियोगितामा जिल्लास्तरीय विभिन्न खेल जितेका छन् । उनी तृतीय भएका थिए । गतवर्ष भएको ८ वर्षमुनिको राष्ट्रिय लनटेनिसमा उनका साथी ब्रिजेस अर्याल च्याम्पियन भएका थिए । यमन राना सेकेन्ड र योगेश ज्ञवाली तृतीय भएका थिए । बुटवलको देवीनगरमा लनटेनिस एकेडेमी छ । त्यसलाई लनटेनिस क्लब बुटवलले सञ्चालन गर्छ । अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न ३ वर्षयता बालबालिकालाई खेल सिकाउन थालेको बताए । ७ देखि १४ वर्ष उमेरका ५० जनाले लनटेनिस सिकिरहेका छन् ।देवीनगरमै एन्फा एकेडेमी छ । रुपन्देही फुटबल संघले यसको सञ्चालन गर्छ । त्यसमा २४ बालबालिकालाई फुलबल खेल्न सिकाइन्छ । उनीहरू दिउँसो पढ्न जान्छन् । अरूजस्तै उनीहरू घर जाँदैनन् । बिहान–साँझ एकेडेमीमै बस्छन् । दिनमा २ घण्टा एकेडेमीमै बसेर फुटबल खेल्न सिक्छन् ।
त्यसका लागि दुई जना प्रशिक्षक छन् । १० वर्षदेखि यो एकेडेमी सञ्चालनमा छ । फुटबल सिक्नेहरूमा १२ देखि १६ वर्षसम्मका छन् । राष्ट्रिय चर्चित फुटबल खेलाडी विमल घर्ती यहींका उत्पादन हुन् । उनले यही एकेडेमीमा खेल सिकेका थिए । यहाँ खेल सिकेका अरू १२ जना पनि राष्ट्रिय खेलाडी बनेका छन् । भर्खरै यहींका विद्यार्थी निराजन खत्री अन्डर–१६ का लागि राष्ट्रिय खेलाडीमा छनोट भएका छन् । ‘सानैदेखि फुटबल खेल्न र सिक्न मन लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले बाबाआमाले एन्फा एकेडेमीमा राखिदिनुभएको हो ।’ निराजनको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने धोको छ । खेलबाटै देशको नाम उचो बनाउने इच्छा छ । सुरुवातमा अगस्ट २३ देखि भारतमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा उनले भाग लिएका छन् ।
खेल्ने विद्यार्थी पढाइमा कमजोर हुन्छन्, धेरै अभिभावक यस्तै सोच्छन् । यसैले कोहीकोही अभिभावक छोराछोरीलाई खेल्न दिँदैनन । तर यो गलत हो । रुपन्देहीको स्मृति बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल हरि ज्ञवाली गृहकार्य सकेर खेल्ने विद्यार्थी पढाइमा कमजोर नहुने दाबी गर्छन् । उनले पाँच वर्षयता एन्फा एकेडेमीका विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन् । ‘खेल्ने र पढ्ने समयबीच तालमेल मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गरे पढाइमा अझ तेज हुन्छन् ।’जानाकारहरूका अनुसार खेलकुद एकेडेमी खेलाडी उत्पादनका जग हुन् । यिनमा खेलको विधि र कला सिकाइन्छ । एन्फा एकेडेमीका व्यवस्थापक तथा प्रशिक्षक बुद्धि गुरुङ बालबालिकालाई यसरी सिकाउँदा नयाँ र राम्रो खेलाडी उत्पादन हुने बताउँछन् । उनका अनुसार खेल बालबालिकालाई अनुशासन सिकाउने माध्ययम पनि हो । यसले नियममा रहेर काम गर्न सिकाउँछ । खेलले शरीर फूर्तिलो बनाउँछ । मनोरञ्जन दिन्छ । कुलतबाट बचाउँछ । मन चञ्चल हुनेका लागि एकाग्र हुन पनि सहयोग गर्छ । तर सबै ठाउँमा रुपन्देहीमा जस्तो एकेडेमीमै गएर खेल्ने अवसर छैन ।
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ११:२६
बिहेले खोसेका सपना
बिहेको २२ वर्षपछि सुनीताले घरपरिवार छोडेकोमा पटक्कै विस्मात भएन । ३८ वर्षेले जसोतसो नर्स पढोस्, आफ्नो चाहना पूरा गरोस् ।
भाद्र १४, २०७६ अमृता अनमोल
मैले घर छोडें नि,’ एक साँझ साथी सुनीताले फोनमा भनी, ‘फुपूको घरमा छु  । ’ ‘ए हो र ? छोडीचाहिँ नहालेको भए हुनी !’ मैले यत्ति भनें  ।
फोन राखेपछि पनि मेरो मनमा तर्कना भने चलिरहे ।सुनीता मेरी बाल्यकालकी साथी । १ देखि १० कक्षासम्म हामीले सँगै पढेका । १० मा पढ्दै थियौं । एक दिन स्कुलबाट घर आउँदा सुनीताको घरमा ५–६ जना ठाँटिएका मान्छे देखिए । उसको हात माग्न आएका रे ! बुटवलबाट खानदानी परिवार माग्न आए भन्ने हल्ला सुनियो । त्यसको ५ दिनमा उसको बिहे भयो । एसएलसी नजिकिएको थियो । बिहेपछि एसएलसी दिँदासम्म ऊ गाउँमै बसी । त्यसपछि बुटवल झरी । पढाइमा निकै तेज थिई । तैपनि बिहेसँगै पढाइ रोकियो । ऊ वर्षमा एकपटक झुल्किन्थी । त्यो पनि दसैंमा पतिसँगै एक दिनका लागि । अनि फर्किहाल्थी । धेरै समय हामीले भेट्नै पाएनौं । लगालगी २ छोरा जन्माई । खरिदार पति अधिकृत बने रे भन्ने सुनियो ।
बिहेको करिब २० वर्षपछि अर्थात् २ वर्षअघि बुटवल चौराहमा सुनीतासित जम्काभेट भएको थियो । त्यतिबेला म पत्रकार बनेकी थिएँ । बुटवलका गन्यमान्यलाई चिन्ने भएकी थिएँ । शिर ठाडो पारेर बोल्ने भएकी थिएँ । ऊ भने पूरापूर गृहिणी । आफ्नो घरपरिवारमा मात्रै सीमित । उसको हक्की स्वभाव निरीह बनेको थियो । चर्को स्वर दबेको थियो । ठाडो शिर निहुरिएको थियो । अनुहारको चमक गुमेको थियो । आँखाबाट आशा गुमेका थिए । तथापि यसले हाम्रो मित्रतालाई केही फरक पारेन । बरु त्यो भेटले फेरि हामीलाई नजिकायो । बाल्यकालमा जस्तै सुखदुःख साट्ने साथी बन्यौं । ऊ किन निराश छ ? असन्तोष छ ? मैले खोतल्न थालें । उसले बताउन थाली ।
हामी स्कुल पढ्दा सपनाका कुरा गर्थ्यौं । ती सपना बिहे र पतिसित जोडिएका हुँदैनथे । आफैं स्वावलम्बी र आत्मविश्वासी बन्ने खालका हुन्थे । सुनीता नर्स बन्न चाहन्थी । लगालगी १० सन्तान जन्माउँदा लागेको बाबुको ऋण तिर्न चाहन्थी । उसका यी सबै चाहना बिहेसँगै मरेका थिए ।
सुनीताले एसएलसीमा दोस्रो डिभिजन ल्याएकी थिई । नतिजा आएपछि उसले घरमा आफ्नो नर्स बन्ने चाहना सुनाई । पढ्न पठाउन बारबार अनुरोध गरी । परिवार राजी भएन । उसलाई माग्ने फुपूसित घरपरिवारलाई मनाउन बिन्ती गरी । फुपूको कुरा पनि उनीहरूले खाएनन् । घरपरिवार राम्रोसित स्याहार–सुसार गरे नर्स बन्ने चाहना पूरा हुन्छ । घरपरिवार यसै भन्थे रे । आमा नबन्दासम्म सुनीताले पढ्ने इच्छा जाहेर गरिराखी । घरपरिवारले टारिराखे । पतिलाई मनाउन हरकोसिस गरी । तर, सकिनँ । यसले उसको मन टुट्न थाल्यो । एक्लै एक्लै रुन र टोलाउन थाली । सपनामा ऐठन हुन थाल्यो । कोही चिच्याउँदा आत्तिन थाली । पतिले यो सबै पढ्न नपाउँदा भएको हो भन्ने बुझेका थिए । तैपनि उनले कहिल्यै बुझेर बुझेजस्तो गरेनन् । धरधरी रुँदा नरोऊसमेत भनेनन् । न त पढ्ने अनुमति नै दिए । उसले जिन्दगीमा हारेको महसुस गर्न थाली ।
बिहेअघि हरेक छोरीलाई आमा, दिदी र भाउजूले लोभ्याएका हुन्छन्– बिहेपछि रानी हुन पाइन्छ । पतिको घरमा राज गर्न पाइन्छ । हामीले पनि आमाहरूका तिनै चिप्ला कुरा सुनेका थियौं । कहिलेकाहीं यस्तै कल्पना गर्थौं । सुनीताको बिहेपछि रानी हुने सपना पूरापूर नोकरानीमा बदलिएको थियो । संयुक्त परिवारकी बुहारी थिई । घरभित्रै पनि यति काम हुन्थ्यो कि बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म मुस्किलले काम सकिन्थ्यो । यद्यपि कसैले उसको काम देख्दैनथे । सघाउन कोही अघि सर्दैनथे ।
सुनीताका पति जब अफिसबाट आउँथे बाहिरैबाट बोलाउँदै कोठाभित्र छिर्थे । उनको कोट खोलिदिनेदेखि कोठामै सर्वत–पानी पिलाउन पुग्थी । कामले थाकेर लखतरान भएको बताउँथे । उसले कहिले टाउको त कहिले खुट्टा मिचिदिन्थी । त्यसमा उसले कहिल्यै अप्ठ्यारो मान्दिनथी । तर शरीर दुखेर थिलोथिलो हुँदा पनि पतिले सुनीताको ख्याल कहिल्यै गर्दैनथे । छोराछोरी नजन्मँदासम्म सुनीताका पति ठीकै थिए । यौनमा अलि लिप्त । सुनीता चुपचाप उनको इच्छा पूरा गरिदिन्थी । उनकै चाहना र भावनाअनुसारका क्रियाकलाप गराउँथे । ऊ आज्ञाकारी विद्यार्थीझैं खुरुखुरु मान्थी । त्यो मानेमा सुनीतालाई माया गर्थे । खाए नखाएको ख्याल गर्थे । पढ्न जिद्दी गर्दा घर गरेर पढ्न दुःख हुन्छ भनेर सम्झाउँथे ।
गर्भवती बनेपछि भने यो सम्बन्ध टाढिन थाल्यो । आमा बन्दासम्म उनको चालढाल अर्कै भैसकेको थियो । राति घरमा ढिलो आउँथे । त्यो पनि रक्सीले मात्तिएर । कहाँ गएको भनेर सोधे मनको इच्छा पूरा गर्न भनेर ठाडो जवाफ दिन्थे । दिनदिनै अन्याय हुँदा पनि सिधै औंला उठाउन सकिन । किनकि उमेरमा पतिभन्दा १० वर्ष कान्छी थिई । पढाइमा पति स्नाकोत्तर हुँदा ऊ एसएलसी मात्रै । यसैमाथि गाउँले र गँवारका उपमा त छँदै थिए । आमा बन्दा बिग्रेको र कमजोर बनेको शरीर पतिका लागि प्रिय थिएन । उनी ससानो कुरामा झोक्किन्थे । बिस्तारै सुनीताका पतिले मदिराको लत बढाए । उनी पूरापूर जँड्याहा बनेका थिए । बिहान साविक अवस्थामा अफिस गएका साँझ कति बेला फर्कन्थे टुंगो थिएन । कसरी फर्कन्छन् आँकलन थिएन । आधा रातमा रक्सीको नशामा आउँथे । खान मन लागे खान्थे । नत्र त्यसै सुत्थे । सुनीताले प्रतिवाद गर्न खोज्यो कि कुट्न थाल्थे । पति आधा रातमा आउनु र कुटाइ खानु उसको दैनिकी बन्न थाल्यो । कुट्दा कुट्दा उसको शरीर नीलै हुन्थो । ऊ हारगुहार माग्थी । तर परिवार कसैले गुहार दिँदैनथे । पतिको चित्त बुझाउन नसक्ने भनेर उल्टै उसलाई दोष लगाउँथे । त्यसको असर छोराहरूमा पनि पर्‍यो । नाबालक छँदा आमापट्टि लाग्ने छोराहरू क्रमशः टाढिन थाले । यसले सुनीताको मन कुँडिन र चुँडिन थाल्यो । घरभित्रको अन्याय कहाँ पोख्ने ऊ अलमलमा थिई । मानौं ऊ पखेटा चुँडिएको पन्छी हो उड्न सक्दिन । इज्जतको खोल ओढेर अन्यायमा जिउँदै थिई ।
हो यस्तै बेलामा सुनीतासित भेट भएको थियो । म बेलाबेलामा उसको घरमा जान्थें । पति र घरपरिवारलाई सुनीता निराश हुनाका कारण सोध्थें । उनीहरू उसको बानी नै असन्तोषी भएको बताउँथे । मैले नर्स बन्ने उसको धोको पूरा गराइदिन आग्रह गर्थें । कहिले कुटेका डाम देखाएर किन यस्तो हुन्छ भनेर सोध्थें । म पत्रकार र उसकी साथी पनि । घरपरिवारले सहेनन् । एक दिन पतिले मुखै खोले– ‘बिन्ती म्याडम तपाईंको बाटोमा मेरी श्रीमती नलगाइदिनुस् । मलाई सोझी र साधारण पत्नी नै मन पर्छ ।’ म जवाफ दिन चाहन्थें तर हाँसेर टारें । अर्को दिन सुनीताले सुनाई त्यो रात पतिले घरका कुरा लगाएको भन्दै बेस्मारी कुटे रे । भाइबरमा फोटो हेरें । नीलडाम शरीरमा मात्रै होइन मुखमा पनि थिए ।
‘म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु । बिहेसँगै मरेका मेरा सपना ब्युँताउन चाहन्छु,’ अन्ततः सुनीताले मुख खोली । मैले उसलाई सहयोग गर्ने वचन दिएँ । अर्को भेटमा उसले बिहे तोड्ने निश्चय गरेको बताई । माइती पक्ष यसमा सहमत हुँदैनथे । किनभने यसअघिका कैयौं कुटाइ र चुटाइबारे उसले माइतीलाई बताएकी थिई । तर इज्जत जान्छ नबोल भन्नेबाहेक अरू जवाफ पाइन ।
यसपालि सुनीता दरिएकी थिई । जस्तोसुकै काम गरेर पनि स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्ने हिम्मत निकालेकी थिई । मैले अन्यायविरुद्ध स्थानीय न्यायिक समितिमा जान सुझाएँ । विडम्बना जानुअघि नै घरपरिवारले थाहा पाए । जानै दिएनन् । बरु हिंसाको सीमा बढाउँदै लगे । यसबाट आजित ऊ जसरी भए पनि छुट्कारा पाउन चाहन्थी । पतिको धनदौलत, इज्जत उसलाई केही आवश्यक थिएन । आवश्यक थियो त स्वतन्त्रता । उसको यौटै इच्छा थियो– निर्भय बाँच्नु । आफ्नो लक्ष्य र सपना पूरा गर्नु ।
‘छोरीलाई नपढाउने तर पढेको ज्वाइँ खोज्ने समाज गलत छ । छोरीलाई दाइजोसित तौलने संस्कार गलत छ । बिहे गर्दा छोरीभन्दा जेठो ज्वाइँ खोज्ने प्रवृत्ति गलत छ । गरिबले धनी केटो खोज्ने चलन गलत छ । यसले पतीपत्नीबीच सामीप्य ल्याउँदैन रैछ । उमेर, पढाइ, शिक्षा, संस्कार र वर्गमा भिन्नता आए । विवाह विवाह हुन्न रैछ । जीवनसाथी साथी होइन सबैभन्दा माथि मालिक हुँदोरैछ,’ सुनीताले लामो गन्थनपछि निष्कर्ष सुनाई, ‘हो यही कारण हामी छोरीले विवाहसँगै आफ्नो स्वतन्त्रता र सपना मार्नुपर्दोरैछ । परतन्त्र बन्नुपर्दोरहेछ । यो चक्र तोड्न चाहन्छु ।’
फगत म स्वतन्त्र बस्न चाहन्छु भन्ने चिठी लेखी र बिनासम्पत्ति घरबाट निस्की । फुपूको घरमा आश्रय लिएकी सुनीता अब कहाँ जाली ? के गर्ली मलाई पटक्कै चिन्ता लागेन । बिहेको २२ वर्षपछि घरपरिवार छोडी पटक्कै विस्मात भएन । ३८ वर्षेले जसोतसो नर्स पढोस् । आफ्नो चाहना पूरा गरोस् । बिहेसँगै मारिएका सपना पुनः पलाऊन् । उसको ओठमा हाँसो आओस् । आँखामा आशा र विश्वास पलाओस् । बूढा र सहाराबिहीन बनेका उसका बाबुआमाको सहारा बनोस् । उसको निर्भीक चाहनामा सहमत भए पति र छोराहरू आउलान् । नत्र ऊ एकल पनि जीवन बिताउन सक्नेछ । मैले मनमनै भावी जीवनको शुभकामना दिएँ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि ।
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ११:४८
हिउँ खस्यो फरर
दृष्टिविहीनसित केको दुश्मनी ?
सम्पादकीय माघ १०, २०७६
काठमाडौंका सडकहरूमा हिजोआज दृष्टिविहीनहरूले निर्बाध गीत गाएर माग्न पाउँदैनन् । महानगरको आदेशमा आएका प्रहरीहरूले उनीहरूको माइक र स्पिकर खोस्छन्, झपार्छन् र आइन्दा यसरी सडकमा नगाउन चेतावनी...
जनताको जित, नेता पराजित
चन्द्रकिशोर माघ ९, २०७६
मधेशमा जे भइरहेको छ, त्यो ठीक भइरहेको छैन । यो कुरा सत्ता प्रतिष्ठान र मधेशी समाजभित्रबाटै उठिरहेको छ । संस्थापन शक्तिबाट योजनाबद्ध रूपमा पहिला मधेशी दल र...
प्रधानमन्त्रीजी, मुटु नभएको को हो ?
डा. रामेश कोइराला माघ ९, २०७६
यसै पनि म जनता हुँ, र थप, म मुटुको उपचार गर्ने कर्म गर्छु । तसर्थ मलाई थरीथरीका मुटुबारे थाहा हुनु स्वाभाविकै हो । मकहाँ आआफ्ना मुटुको हालत...
कांग्रेसमा विरासतको प्रश्न
किशोर नेपाल माघ ९, २०७६
केही समयअघि निरञ्जन कोइरालासँग बौद्ध महांकालस्थित उनको निवासमा भेट्दा उनले सोधेको एउटा प्रश्नले मलाई झस्काएको थियो । निरञ्जनको प्रश्न सोझो थियो, ‘समकालीन नेपाली समाजमा बीपीको स्थान...
सम्पादकीय माघ ९, २०७६
नेकपा संगठन विभागले पार्टी नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूका लागि जारी गरेको आचारसंहितामाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । मननयोग्य के छ भने— यी प्रश्न आचारसंहिताको अन्तर्वस्तुमाथि होइन,...
यस्तो बनोस् पशुपति विश्वविद्यालय
दिवाकर आचार्य माघ ८, २०७६
केही दिनअघि एक लेखमार्फत पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारेका छन् । यस प्रस्तावको स्वागत गरिनुपर्छ र सरोकारवाला निकायहरूले...